पत्नी सिताको उपचारका लागि प्रचण्ड भारतमा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > पत्नी सिताको उपचारका लागि प्रचण्ड भारतमा!
admin January 4, 2021 January 4, 2021 समाचार	0
काठमाडौँ- नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहाललाई उपचारका लागि सोमबार भारतको मुम्बई लगिने भएको छ। अस्वस्थ भई केही दिनदेखि राजधानीको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी सीता दाहाललाई थप उपचारका लागि मुम्बई लैजान लागिएको हो’।
संसद विघटनपछि आन्दोलनमा ओर्लिएका दाहाल-नेपाल पक्षका प्रमुख नेता दाहाललाई भने श्रीमतीको उपचारमा मुम्बई जाने कि नजाने दोधार भएको छ’। पारिवारिक स्रोतका अनुसार दाहालले छोरीहरुलाई आमासँग उपचारका लागि जान आग्रह गरेका छन् भने सीताले भने श्रीमान् दाहालको साथ चाहेकी छन्’।
३७ हजारभन्दा बढि स्वाब परीक्षण गरेकि डा. नितु अधिकारी आफैँ सङ्क्रमित
दाङकाे घोराहीबाट भागेर भारत छिर्दै गरेका ५ जना नियन्त्रणमा